Abanikazi eselula, ngisho nge osayizi enkulu screen ngokwanele ngokuvamile uthanda ukubuka isithombe noma ividiyo igajethi yakho, bese uxhuma ifoni ku-TV. onobuhle Modern futhi kumadivayisi eselula, nama-TV iba nazo zonke izimfanelo for ukuqaliswa nokuxhumana okunjalo. Kodwa izinzuzo ukudluliswa kwedatha nhlobo nekutsi uphetsa ngalokufanele yini.
Yini angadluliselwa efonini ephaneleni TV?
Ngeshwa, iningi abasebenzisi kukhawulwe kuphela yokuthi iphaneli abheke Smart TV izithombe, ama-movie, amavidiyo zigcinwa kumadivayisi inkumbulo. Kodwa yesimanje nobuchwepheshe amathuba ubanzi kakhulu.
Lonke Iphuzu liwukuthi ngaphansi kwanoma iyiphi simo uxhumano okuzocatshangelwa eceleni, kungaba kwenziwe ukudluliswa isiqophi noma ihluzo hhayi kuphela esikrinini esikhulu. With the lula efanayo lapho isofthiwe efanele, ungakwazi ukubuka i-TV online, ukudlala ividiyo ku-YouTube yomthombo efanayo, noma ngisho ukulawula ke kusukela kufoni yakho noma kuthebulethi yakho, uma inkonzo enjalo inikezwe ku-TV. Ekugcineni, ngawo-flat-panel, ungakwazi kalula ukuhumusha umdlalo noma kusetshenziswe kumadivayisi eselula hlelo. Njengoba ubona, azikho imingcele. Kodwa kuyiyona nto ebaluleke kunazo ekuxazululeni izinkinga kanjani ukuze uthumele izithombe kusuka efonini yakho kuya ku-TV noma kunjalo kuwukukhetha yezindlela elilungile ukuxhuma igajethi iphaneli. Cabanga ongakhetha ezivamile.
Indlela ukudlulisa izithombe kusuka efonini yakho kuya ku-TV: Izindlela eziyinhloko ukuxhuma
Evamile, idivayisi yeselula ne-flat-panel zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili eziyinhloko: olunezintambo futhi wireless. Cishe zonke yesimanje TV ukweseka okungenani omunye yakhiqizwa ukudluliswa kwedatha ubuchwepheshe, noma esakhelwe-Wi-Fi module. Nokho, i-panel ukuguga futhi babe izixazululo zabo, nakuba kubonakala sengathi ngake nzima.
Phakathi konke manje enikela emakethe intuthuko enjalo, izinketho esemqoka imi kanje:
ezivamile ikhebula inhlangano yabantwana bakwa-"Tulip";
uxhumo lezintambo nge MHL / Ikhebuli ye-HDMI;
Xhuma ngokusebenzisa ekhaya Wi-Fi kunethiwekhi;
ukusetshenziswa kobuchwepheshe ezikhethekile (Miracast, AirPlay futhi analogue zabo).
Injalo elula, ungasebenzisa i abavamile flat-panel, okuyinto ixhunywe nge echwebeni USB esikhundleni amamodeli yamanje Smart TV. Kulokhu, idivayisi yeselula kuzobhekwa kuphela njengendlela drive flash, isetshenziselwa babonisa lirekhodiwe amafayela isithombe, ividiyo noma audio. Kuyinto lolumalula khulu, gxila nokuxhumana okunjalo, akudingekile, ikakhulukazi njengoba uhlelo ukusakaza esikrinini, imidlalo noma ukusakaza ividiyo kusuka ku-intanethi ngeke zisebenze. Ungasebenzisa UPnP ubuchwepheshe, kodwa futhi into efana USB-transmission, kodwa ngaphandle izintambo. Ake sicabangele izindlela sokusebenza ngaphezulu zokuxhuma.
Ukusebenzisa Ikhebuli ye-HDMI (kwakwakhe MHL)
Ngakho, ukubhukelwa ukuthi nezindaba ezihlobene nendlela bahlabe umkhosi isithombe kusuka TV esikrinini Ifoni ngeke kucatshangelwe ngezizathu ukuthi kumane nje akwenzeki ngokoqobo. Kulokhu, sinesithakazelo kwesikwenzayo yokuxhuma kumadivayisi eselula kuya flat-panel kanye okuhambisanayo idatha isiqondiso.
Ngakho, indlela elula kubhekwa ukuxhuma amadivayisi amabili esebenzisa ezivamile Ikhebuli ye-HDMI. Ngomqondo nalokhu uyakhumbula ukusungulwa zokuxhumana nge-USB, kodwa ifoni yakho noma ithebhulethi ayisaxhunyanisiwe beqonda njengedivaysi yesitoreji esikhiphekayo, futhi babhekwa njengabantu igajethi osebenza ngokugcwele. Nakuba khona izintambo eziningi kungase kubonakale ubuchwepheshe izolo, ukuxhumana okunjalo kunezinzuzo eziningi ngenxa ukubambezeleka ukudluliswa yesithombe neze. Impela wamane, ungakwazi ukusakaza ividiyo njengoba HD Ultra ngomsindo 7.1 (DTS-HD kanye Dolby TrueHD) ngisho ukushaja kumadivayisi eselula, amandla ingeqi 10 V. Ukuze sibonise isithombe kuthiwa ezintathu izinhlobo izintambo ingasetshenziswa:
-HDMI Standard nge ikhebula adaptha ngokuhlanganyela-micro-USB yokuxhuma sangaphandle ugesi.
MHL ikhebula ukuthi uxhuma iphaneli TV nge yocezuningi isixhumi ngqo.
A ekhethekile 11-pin ikhebula Samsung. Ukuxhuma amadivaysi nge 5-pin nezixhumi e-adaptha edingekayo.
Inketho yokuqala kungaba ngokuthi jikelele, kodwa lonke izinhlobo uxhumano isekelwa inani elilinganiselwe panel TV nezinqunjwana ephathekayo.
Kuyadingeka izimo kokuqala ukufakwa uxhumano olungenantambo
Elinye ikhambi elula yalowo mbuzo ukuthi ukuze uthumele izithombe kusuka efonini yakho kuya kwi-TV, i-ubunye amadivayisi amabili nge inethiwekhi ekhaya engenantambo.
Nokho, kuleli cala, i-TV kumele abe esakhelwe-Wi-Fi-module. Uma kungenjalo, ungakwazi ukuthenga idivayisi yangaphandle exhunywe olusebenzisa echwebeni USB. Ngaphezu kwalokho, isibonelo, kwi-Android kumadivayisi ihloselwe zihlanganisa imodi ye-Wi-Fi Okuqondile. Ukwenza kusebenze ukuxhumeka onobuhle ezahlukene panel TV ezocatshangelwa ngokwehlukile.
DLNA inethiwekhi engenantambo
Uma uxhuma ngenethiwekhi ekhaya, ungasebenzisa esakhelwe-DLNA, olutholakalayo ze-Android-izinhlelo. Ngeshwa, "apula" devaysakh unike amandla ukuxhumeka enjalo kuyinkinga ngokwakho kodwa njengoba uhlobo kwebhuloho, ungafaka zokusebenza ezifana Remote yami ukusuka Phillips corporation.
By the way, Android zingenza phelisa isethi ejwayelekile amathuluzi kanye nezinhlelo ezifana PlugPlayer noma wenze uxhumano nge jikelele semidya WD-TV bukhoma. Nokho, lokhu - hhayi ukhetho elula kunazo, ngoba ngesikhathi okusezingeni eliphezulu umthwalo esanele Inethiwekhi kamakhalekhukhwini ingase ukuzwa ukubambezeleka transmission, kanye nezimboni yesivinini sokuxhuma, setha wesevisi ukuze uthole inethiwekhi ekhaya engenantambo, nakho kunendima okuyifezayo.
Omunye amathuluzi enemisebenzi kakhulu iyona ukusetshenziswa kobuchwepheshe ezikhethekile elakhelwe ukuhlangabezana nezinselele wokuhumusha evela kumadivayisi eselula ukuze flat-panel namathelevishini. Lobu buchwepheshe Miracast. abakhiqizi ezahlukene kungase abe amalebula ezahlukene. Ngokwesibonelo, i-Samsung kuyinto efanayo umsebenzi Screen isibuko, Sony - Mirror Link, kusukela Apple - AirPlay.
Kodwa la maphayona namanje Zonke-Android uhlelo. Ukuze uxhume-smartphone noma ithebhulethi, uzodinga amandla izinketho-Wi-Fi bese ufaka i-Wi-Fi Ngqo, futhi umthombo TV kuyakhethwa Miracast. Kumadivayisi eselula uqhubeke ukukhetha TV, okumele uvele kuhlu ke kuzilungiselelo setha abezindaba okukhiphayo. Kuwufanele uqaphele ukuthi akuzona zonke Smartphones ukwesekwa Ukujikeleza esibukweni. Kodwa-Sony Xperia ZL at noshintsho ukuma kusuka portrait kuya landscape isithombe iphaneli TV icima ngokuzenzakalelayo. Futhi kucace isithombe ifoni ku-TV WiFi idluliselwa kuphela uma control panel kuyinto isizukulwane Smart TV.
Manje amagama ambalwa mayelana "apula» AirPlay ubuchwepheshe. Empeleni, kuba pheze i-analog ephelele Miracast TV. Nokho, Ukudlulisa akukwazi okuvela ngaphandle okusemqoka - ekhethekile Apple TV set-top box ukuthi TV ixhuma ngokuqondile.
Ukusebenzisa umsebenzi Replay kudivayisi udinga kabili empompini Ikhaya inkinobho, skrolela ezansi ohlwini lwezinhlelo zokusebenza iyatholakala futhi ukuthola AirPlay. Emnyango kuwo wonke amadivayisi ezitholakalayo okwamanje ziboniswa esigabeni ukuthi bangathola i-signal. Kwanele ukhethe exhunyiwe semidya bese wenza kusebenze yokudlulisela.
Ukusebenzisa Streambels futhi WiDi
Umkhiqizo isofthiwe Streambels, akhiwa Clockworkmod, neze into efana Miracast noma AirPlay. kumadivayisi eselula screen lapho uxhumeke akuyona liphindwe kabili. Ungadlala amafayela, njengoba kunjalo uma uxhumano ezivamile nge-USB.
Kodwa WiDi ubuchwepheshe ekuqaleni lakhiwa esikhundleni Miracast, kodwa ukusakazwa futhi azizange zifike. Kuze kube manje, it is ikakhulukazi elisetshenziswa Intel zokubhalela nakuba imizamo muva nje kuye kwaba ukuhlanganisa e amagajethi ephathekayo.
Izici uxhumano onobuhle ezithile TV
Manje ake sibheke ezinye ezicashile isignali ukusakaza ku panel ezithile onobuhle TV.
Indlela elula ungakwazi ukubonisa isithombe kusuka efonini yakho kuya ku-TV LG. Uma uvula uxhumano ku-smartphone yakho ku-TV kwimenyu enkulu, khetha Inethiwekhi nesigaba-Wi-Fi Okuqondile. Khona-ke nje uhlala balinde kuze iphaneli ziyonquma idivayisi yeselula.
On Sony inkinobho TV ku elawulwa kude ukhethe "Izinketho" ke - imenyu "Manuwali" ke - esigabeni "Ezinye izindlela", lapho udinga ukukhumbula noma ukubhala phansi SSID WPA izilungiselelo. Babe kufanele ufake uma uxhuma smartphone yakho.
On Samsung panel ukuba "Inethiwekhi" kukhethiwe kwimenyu enkulu, bese ushintshele eduze umugqa "Progr.AR" kusethelwe ON. Khona-ke udinga ukuthuthela ukhiye wokuphepha bese usetha iphasiwedi ehlukile ukufinyelela uxhumano. Kuphela ngemva kwalokho ku-Android kudivayisi ukukhethela yokufinyelela ukuthi uxhuma kunethiwekhi, bese ukhetha amafayela, cindezela inkinobho Abelana.
izinkinga ezingaba khona uma udlala
Ngakho, umbuzo kanjani ukuze uthumele izithombe kusuka efonini yakho kuya ku-TV isivele ihlaziye. Nokho, nge ukubandakanywa yiluphi uhlobo uxhumano udinga ukuba banake ezinye izinkinga ezingaba khona ezihlobene ukuqeda iziphazamiso ezazingase ekusakazeni.
Okokuqala, kumayelana amacala ukusetshenziswa Miracast. Lokhu disconnections uxhumano kungenzeka uma phakathi TV kanye idivayisi yeselula has isithiyo. Kukholakala ukuthi ezincane ibanga phakathi amadivaysi, ngcono.
Ezinye Isobho unekhono ukuhumusha amafayela, kopisha evikelwe, kodwa kuyisimo esifanayo flat-panel Phillips ukudlala kwabo akusekelwe.
Umthwalo inethiwekhi wireless kungandisa ngokuphindaphindiwe, ngoba uma udlala yokusakaza video sithombe sokuqala idluliselwe idivayisi yeselula, bese kuphela ukudlalwa emuva kwi-TV. Ngenxa yalokho - .. Ukubambezeleka deceleration lag umsindo kuvidiyo, njll Ekugcineni, akuzona zonke kumadivayisi eselula ukusekela ukusungulwa ukuxhumana ezimbili. Ngokwesibonelo, amanye amamodeli Sony Smartphones kungenziwa exhunywe noma kwi-Inthanethi noma Miracast (Mirror Link).
Kodwa ku lonke umbuzo kanjani ukuze uthumele isithombe ifoni TV, it is ixazululwe nje ngokwanele. Kunoma ikuphi, konke okungenhla-wabonisa, ungakhetha bona okuthile ofanele. Phakathi amathiphu amaningi ungakwazi eceleni ukuhlonza izincomo yokuthi kunoma yimuphi uxhumano kuyatuseka ukuba kokubili idivayisi yeselula ne-TV nomkhiqizi eyodwa. Kulokhu, akukho izinkinga nhlobo.
Neminyango IT? Kuyinto evamile Lisebenzise Ukukhipha ...
Indlela nenkhulumombiko cash flow ukuhlaziywa. Cash Flow Management
Isomers wezakhiwo - wukuthi
I-Meningitis. Indlela yokubamba indlela elula kanye nezinyathelo zokuvimbela ukutheleleka
Ukwelashelwa otitis lehla "Otipaks": ukubuyekezwa, isicelo, umphumela okubhekiwe
Openwork jacket spokes: isikimu kanye nencazelo. amaphethini Openwork ukunitha izinaliti